Nootropics पाउडर Centrophenoxine (meclofenoxate) लाभ र स्ट्याक्स
अगस्ट 7, 2020
सेन्ट्रोफेनोक्साइन, जसलाई मेक्लोफेनोक्सेट वा सेन्ट्रो पनि भनिन्छ, एक शक्तिशाली नूट्रोपिक पदार्थ हो जुन प्रारम्भिक र व्यापक अनुसन्धानको बीचमा रहेको छ। nootropics.
यो केही देशहरूमा ब्रान्ड नाम, लुसिड्रिलले एक औषधीको रूपमा मार्केटिंग गर्दछ र विश्वका अन्य क्षेत्रहरूमा ओभर-द – काउन्टर पूरकको रूपमा पनि।
सेन्ट्रोफेनोक्साइन पहिलो पटक १ 1959। In मा फ्रान्सेली वैज्ञानिकहरूले उमेर सम्बन्धी विकार, अल्जाइमर रोगको उपचारको रूपमा विकसित गरेका थिए। यो देखि उमेर सम्बन्धित रोगहरु लाई राहत र समग्र मस्तिष्क स्वास्थ्य मा यसको क्षमता को लागी व्यापक अध्ययन गरीएको छ।
सेन्ट्रोफेनोक्साइन दुई रासायनिक यौगिकहरूको एस्टर हो, अर्थात्, डिमेथाइल-एमिनोइथेनोल (DMAE) र प्याराक्लोरफेनोक्सियासेटिक एसिड (pCPA)।
Dimethyl-aminoethanol (DMAE), मस्तिष्कमा मिनेटको मात्रामा स्वाभाविक रूपमा देखा पर्छ र माछा जस्ता केही खानाहरूमा पनि फेला पार्न सकिन्छ। यो कोलीनको राम्रो स्रोत हो। यसको परिधीय शरीरका ऊतकोंमा कोलोनको सेवन रोक्न सल्लाह गरिएको छ त्यसैले दिमागमा कोलीनको स्तर बढाउनुहोस्। Choline, acetylcholine का एक अग्रदूत, लाई Acetylcholine मा पनि रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। अधिक acetylcholine ले अझ राम्रो संज्ञानात्मक समारोहमा डोर्‍याउँछ।
प्याराक्लोरफेनोक्साइसेटिक एसिड (pCPA)auxins रूपमा चिनिने वनस्पति वृद्धि हार्मोनको एक रासायनिक-व्युत्पन्न रूप हो। पीसीपीए मूलतः DMAE लाई प्रभावी ढंगले रगत दिमाग अवरोध पार गर्न मद्दत गर्दछ।
यो मुख्यतया यसको स्मृति र सिक्ने जस्ता संज्ञानात्मक समारोह सुधार गर्न र मस्तिष्कको स्वास्थ्यलाई बृद्धि गर्नका फाइदाहरूको लागि लोकप्रिय छ। यो एक राम्रो एंटी-एजिंग एजेंट पनि हो। सेन्ट्रोफेनोक्साइन स्ट्याक अन्य नूट्रोपिक औषधिहरू विशेष गरी रेसट्यामसँग धेरै राम्रोसँग काम गर्दछ।
कार्यको मेक्लोफेनोक्सेट संयन्त्रमा न्यूरल कोशिकामा एसिटिल्कोलिन बृद्धि गर्नु, नयाँ न्युरोल कोषहरूको बृद्धि गर्न सहयोग गर्नु, न्युरोनहरूको बिचमा सञ्चार बृद्धि गर्नु, रगत र अक्सिजन उपभोगलाई सुधार गर्नु, लिपोफसिनलाई हटाउनु र परिधीय शरीरको ऊतकोंमा एसिटिल्कोलीन मेटाबोलिज्म रोक्नु समावेश छ।
Centrophenoxine सामान्यतया एक सुरक्षित पूरकको रूपमा मानिन्छ। व्यक्ति प्राय: सेन्ट्रोफेनोक्साइन पाउडर अनलाइन खरीद गर्छन्। यो पाउडर, ट्याबलेट र क्याप्सुलको रूपमा बेचिन्छ।
Centrophenoxine के हो?
सेन्ट्रोफेनोक्साइन (मेक्लोफेनोक्सेट) एक मजबूत नूट्रोपिक यौगिक हो, जुन संयोजन हो Dimethyl-aminoethanol (DMAE) र प्याराक्लोरफेनोक्सियासेटीक एसिड (pCPA). यसलाई सेन्ट्रो वा लुसिड्रिल पनि भनिन्छ।
यसलाई कोलिनेर्जिक नूट्रोपिक भनिएको छ जसको प्राथमिक कार्य संज्ञानात्मक समारोह र सामान्य मस्तिष्क स्वास्थ्य बृद्धि गर्नु हो। यसले मुडलाई बढावा दिन र एन्टि-एजिंग एजेन्टको रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।
Centrophenoxine र DMAE दुबै पूरक हुन् जुन मुख्य रूपमा संज्ञानात्मक कार्यको सुधारका लागि प्रयोग गरिन्छ। जबकि, DMAE को सक्रिय घटक हो Centrophenoxine पूरक, PCPA सँगै। DMAE एक प्राकृतिक पदार्थ हो जुन दिमागमा थोरै मात्रामा र केहि खानाहरू जस्तै माछामा फेला पर्दछ।
त्यहाँ अपर्याप्त प्रमाणहरू छन् कि DMAE पूरकले रगत दिमागी अवरोधलाई प्रभावकारी रूपमा पार गर्न सक्छ। तर, जब PCPA DMAE मा थपियो, यसले DMAE जैवउपलब्धताको साथ मद्दत गर्दछ। तसर्थ, Centrophenoxine एक पूरकको रूपमा DMAE भन्दा एक मजबूत nootropic पूरक मानिन्छ।
नतीजा, अन्य nootropics संग Centrophenoxine स्ट्याक DMAE भन्दा राम्रो परिणाम दिन सक्छ।
सेन्टरफेनोक्सिन मस्तिष्कमा कसरी काम गर्दछ?
Centrophenoxine फाइदाहरूको बारेमा विस्तृत अध्ययनको बावजुद, यसको सही प्रकारको कार्य अझै पूर्ण रूपमा बुझिएको छैन। यद्यपि अनुसन्धानकर्ताहरूले केही केहि meclofenoxate कार्यहरूको प्रस्ताव गरेका छन्।
केहि meclofenoxate को कार्यहरु को संयन्त्र समावेश;
मस्तिष्कमा एसिटाइलकोइनको स्तर बढाउदै
यो कार्यको प्राथमिक मोड हो जुन मार्फत सेन्ट्रोफेनोक्सिन नूट्रोपिक क्षमता प्रदर्शन हुन्छ। Acetylcholine कुञ्जी neurotransmitter सामान्य संज्ञानात्मक फंक्शन शिक्षा र स्मृति सहित सम्बन्धित छ।
जब सेन्ट्रोफेनोक्साईन रगत दिमागमा अवरोध पार गर्दछ यो कोलोइनमा बिच्छेद हुन्छ जुन पछि एसिटिचोलिनमा परिणत हुन्छ। यसले फोस्फोलिपिडमा रूपान्तरण गर्न पनि सक्षम छ जुन एसिटिचोलिन बनाउन प्रयोग गरिन्छ।
यसैले मस्तिष्कमा एसिटाइलकोइनको स्तर बढाउँछ।
सेलुलर फोहोरबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ जस्तै लिपोफुसिन
Lipofuscin असंतृप्त फ्याटहरूको ऑक्सीकरणको फोहोर उत्पादन हो। तिनीहरू सामान्य रूपमा हाम्रो उमेर कोषहरूमा निर्माण हुन्छन् र खैरो कलेजो दागको रूपमा देखा पर्दछ। यी विषाक्त फोहोरमा भारी धातुहरू पनि समावेश हुन सक्छ जस्तै एल्युमिनियम र पारा।
सेन्ट्रोफेनोक्साइनले मस्तिष्क कोषहरूबाट लिपोफुसिन हटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसले शरीरका अन्य कोशिकाहरूबाट पनि फोहोर हटाउँछ।
मस्तिष्कमा ग्लूकोज अपटेक र रगत प्रवाह सुधार
ग्लूकोजको सेवन बढाउँदै, सेन्ट्रोफेनोक्सिन पूरकले अधिक मानसिक उर्जा उत्पादनलाई उत्तेजित गर्दछ। जबकि सुधारिएको रक्त प्रवाह दिमागमा अक्सिजन को स्तर बढाउँछ।
Centrophenoxine antioxidant क्षमता
उत्कृष्ट Centrophenoxine antioxidant गुणहरू मस्तिष्कमा फ्रि रेडिकलहरू हटाउन यसको क्षमताले स्पष्ट रूपमा प्रदर्शन गरेको छ। यी नि: शुल्क रेडिकलहरूले अक्सर अक्सिडेटिभ तनाव निम्त्याउँछ जुन उमेरसँग सम्बन्धित विकारहरूको साथ शरीरमा अन्य विकारहरूसँग सम्बन्धित छ।
सेन्ट्रोफेनोक्सिनले रक्त-मस्तिष्क बाधालाई पार गर्ने महत्त्व के हो?
कार्यको प्राथमिक meclofenoxate संयन्त्र synaptic पुटिकामा एसिटिल्कोलीनको स्तर बढाउँदैछ। त्यसकारण, सेन्ट्रोफेनोक्साइन पूरकले रगत-मस्तिष्क बाधा पार गर्न आवश्यक छ नुनट्रोपिकको रूपमा यसको भूमिका खेल्न।
जब सेन्ट्रोफेनोक्साइनले यो अवरोध पार गर्दछ त्यसपछि यो किलिनमा बिग्रिन्छ जुन एसिटिल्कोलीनमा रूपान्तरण हुन्छ वा एसिटिल्कोलिन बनाउन प्रयोग गरिने फोस्फोलिपिडमा रूपान्तरण हुन्छ।
Acetylcholine स्तर यसरी राम्रो स्मृति र सिक्ने परिणामस्वरूप बढाइन्छ।
त्यहाँ तलका उत्पादनहरू पनि छन्:
Meclofenoxate का फाइदा (Centrophenoxine)
अध्ययनले शरीर र मस्तिष्क दुबैका लागि meclofenoxate फाइदाहरूको विस्तृत श्रृंखला पत्ता लगाएको छ। यी meclofenoxate फाइदाहरू:
i. मेमोरी र सिकाई सुधार गर्दछ
सबै भन्दा लोकप्रिय Centrophenoxine लाभ यसको nootropic गुणहरु मा निहित छ। सेन्ट्रोफेनोक्साइनले एसिटिचोलिनको स्तर बढाउँदछ, जुन मस्तिष्कको मुख्य न्यूरोट्रान्समिटर हो।
केहि जनावर र मानव अध्ययन संज्ञानात्मक कामकाजमा Centrophenoxine फाइदाहरू प्रकट गर्दछ। उदाहरण को लागी, elderly 76 बुढो व्यक्तिहरु संग डबल-ब्लाइन्ड परीक्षण मा, meclofenoxate लगभग about महिना को लागी दैनिक m००mg मा प्रशासित थियो। यो दीर्घकालिक मेमोरी सुधार गर्न र मानसिक सतर्कता वृद्धि गर्न फेला पर्‍यो।
Ii। यसले मुड र प्रेरणालाई बढावा दिन्छ
Centrophenoxine यसको सक्रिय घटक DMAE मार्फत तपाईंको मुड बढाउने सल्लाह दिइन्छ। यसले चिन्ता कम गर्न र प्रेरणा बढाउन सक्छ।
श shock्कामा पर्दा मुसाको अध्ययनमा 100 दिनको लागि १००mg / किलोग्राम शरीरको वजनमा meclofenoxate दिईएको चिन्ता कम गर्न
Iii। न्यूरोप्रोटेक्सनका साथै एन्टि-एजिंग बेनिफिटहरू पनि प्रस्ताव गर्दछ
यो Centrophenoxine पूरक न्यूरोप्रोटेक्टिव गुणहरू भएको दावी गरिएको छ। सेन्ट्रोफेनोक्साइन सजिलै सेलुलर फोहोर र मस्तिष्क र शरीरबाट lipofuscin बाहिर फ्लश। यी फोहोरहरू सामान्यतया बुढेसकालसँग सम्बन्धित हुन्छन् त्यसैले उनीहरूको हटाउनाले एन्टी-एजिंग प्रक्रियाहरूलाई सहज बनाउँदछ।
डिमेन्शियाबाट पीडित elderly० बुजुर्ग बिरामीहरूसँग गरिएको एउटा अध्ययनमा सेन्ट्रोफेनोक्साइनले स्वतन्त्र रेडिकलहरूबाट मुक्त हुन पाए जसले गर्दा उनीहरूको स्वस्थ अवस्था पुनर्स्थापित भयो भन्दै, बुढ्यौलीलाई उल्टाउँदै।
iv। आयु बढाउन सक्छ
मस्तिष्कमा फ्रि रेडिकल र लिपोफसिन हटाउने सिद्धान्तले सेन्ट्रोफेनोक्सिनलाई आफ्नो आयु बढाउन सक्षम गर्दछ। जब दिमाग सफा हुन्छ यो लामो समय सम्म कार्य गर्न सक्षम हुन्छ।
यो चूहोको अध्ययनमा प्रदर्शन गरिएको थियो जहाँ सेन्ट्रोफेनोक्साइनले आफ्नो आयु 30०- by40० %सम्म विस्तार गर्न सक्दछन्।
v. अधिक मस्तिष्क उर्जा गर्न जान्छ
मेक्लोफेनोक्सेट मस्तिष्कमा रगत प्रवाह बढाउनको लागि पर्याप्त अक्सीजन मस्तिष्कमा पुग्न अनुमति दिईन्छ। ग्लुकोजको अपटेक सुधार गर्न पनि भनिन्छ। यसले थप मस्तिष्क उर्जाको साथ साथै प्रेरणालाई बढावा दिन सहयोग गर्दछ।
वृद्ध व्यक्तिहरूसँगको अध्ययनमा, दैनिक3g को एक उच्च सेन्ट्रोफेनोक्सिन खुराक अक्सिजनको मात्रा बढाउन र उपवास ग्लुकोजलाई कम गर्न पाईन्छ।
यो कुनै पनि पूरक को कम खुराक को लागी शुरू गर्न को लागी सल्लाह दिन को लागी सल्लाह दिईन्छ। दिनमा २ twice० मिलीग्राम स्प्लिटको सेन्ट्रोफेनोक्सिन खुराक सिफारिश गरिन्छ र धेरै व्यक्तिहरूले यो खुराक सहन गर्छन्।
यद्यपि, एक दिनमा दुई पटक विभाजन गर्न 500mg-1000mg को एक उच्च सेन्ट्रोफेनोक्सिन खुराक पनि प्रयोग गरीएको छ। पूरकमा लिप्त हुनु अघि तपाईंको मेडिकल विज्ञसँग परामर्श लिन आवश्यक छ किनकि त्यहाँ केही contraindication छन्।
अधिकतम मेक्लोफेनोक्सेट लाभका लागि, यो बिहान र दिउँसो खानाको साथ लिनुपर्दछ। सुत्ने अघि मेक्लोफेनोक्सेट पूरक लिनबाट जोगिनुहोस् किनकि यसले अक्सर अनिद्रा निम्त्याउँछ।
साइड इफेक्ट र सुरक्षा
Centrophenoxine पूरक सुरक्षित रूपमा मानिन्छ। जहाँसम्म, कुनै औषधि जस्तै केहि व्यक्तिले केहि हल्का वा मध्यम साइड इफेक्ट र अधिक खुराकको साथ अधिक सम्भावित रिपोर्ट गर्न सक्दछन्।
Centrophenoxine nootropic बेनिफिटहरू एसिटिचोलिनको स्तर बढाउँदै मुख्य रूपमा प्रदर्शन गरिन्छ। जब एसिटाइक्लोइन स्तर बढी हुन्छ, केही साइड इफेक्टहरू पनि अनुभव गर्न सकिन्छ।
केहि meclofenoxate साइड प्रभाव सामिल छन्; टाउको दुख्ने, चिन्ता, अनिद्रा, हल्का देखि मध्यम उदासीनता, मतली, उच्च रक्तचाप, पेट मुद्दाहरू, जलन, र तन्द्रा।
यदि तपाईं त्यस्ता मुद्दाहरूको डोज कम गर्नुहुन्छ र तपाईंको चिकित्सकसँग परामर्श लिनुहुन्छ भने।
यसबाहेक, सेन्ट्रोफेनोक्साइनले केही जन्म प्रभाव निम्त्याउन सक्छ र त्यसैले गर्भवती महिला र गर्भवती हुन योजना बनाउनेहरूले यो पूरकबाट बच्नुपर्दछ।
त्यहाँ अन्य औषधिहरू जस्तै सेन्ट्रोफेनोक्साइनको केही contraindication छन् जस्तै उन्नत डिप्रेसन, पार्किन्सन रोग, दौरा, र द्विध्रुवी विकार जस्ता रोगहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिने। यस्तो औषधी लिने जो कोहीले मेक्लोफेनोक्सेट पूरकबाट अलग रहनु पर्छ किन कि यसले तिनीहरूको अवस्था बिगार्न सक्छ।
Centrophenoxine choline स्रोत अन्य nootropics साथ संयोजनमा राम्रो काम गर्दछ। सँधै नूट्रोपिक्सलाई विचार गर्नुहोस् जुन सेन्ट्रोफेनोक्साइन स्ट्याकको साथ synergistically काम गर्दछ। तल केहि सेन्ट्रोफेनोक्सिन स्ट्याकहरू छन्;
Piracetam एक रेसट्याम हो स्मृति, एकाग्रता, मुड, र शिक्षा सहित मस्तिष्क स्वास्थ्य बृद्धि गर्न एक nootropic को रूप मा मानिन्छ। Piracetam एक उत्कृष्ट Centrophenoxine स्ट्याक बनाउँछ यी दुई पूरक धेरै राम्रो संग। Piracetam वास्तवमा choline कुशलतापूर्वक काम गर्न आवश्यक छ।
Noopept आज बजार को सबै भन्दा प्रभावकारी nootropics हो। जब सेन्ट्रोफेनोक्साइनको साथ स्ट्याकको रूपमा प्रयोग गरिन्छ यसले अनुभूति, मेमोरी र तर्कमा सुधार गर्दछ।
एनिरासेटम एक रेसटम पनि हो तर पाइरासिटामको विपरीत जुन एसिटिचोलिनको प्रभावहरू नियन्त्रण गर्न काम गर्दछ, एनिरासिटाम मस्तिष्कको रिसेप्टर्सलाई उत्तेजकको रूपमा काम गर्दछ जुन एसिटिल्कोइनलाई प्रतिक्रिया दिन्छ।
जब सेन्ट्रोफेनोक्साइनसँग सँगै लगिन्छ, यो प्रभावकारितामा सुधारको लागि फेला पर्दछ। एनिरासिटामले कोलीनको स्तरमा कमी ल्याउँछ यसैले जब सेन्ट्रोफेनोक्साइन स्ट्याकमा प्रयोग गरिन्छ यस साइड इफेक्टलाई हटाउन सक्षम हुन्छ।
Centrophenoxine को FAQ
सेन्ट्रोफेनोक्साइनको आधा जीवन भनेको के हो?
Centrophenoxine अत्यधिक जैवउपलब्ध छ र सजिलै मस्तिष्क द्वारा लिएको छ। यसले काम सुरू गर्न लगभग -०-30० मिनेट लिन सक्दछ। यद्यपि अन्य अध्ययनहरूले २--60 घण्टाको आधा जीवन रिपोर्ट गर्दछ महत्त्वपूर्ण meclofenoxate लाभहरू काट्न।
सेन्ट्रोफेनोक्साइन पूरक लिनको लागि उत्तम समय के हो?
सेन्ट्रोफेनोक्साइन पूरक बिहान र दिउँसो दुई खुराकमा राम्रो लिन्छ। सुत्ने अघि सेन्ट्रोफेनोक्साइन लिनबाट जोगिनुहोस् किनभने केही मानिसहरूले यस समय लिदा केही निन्द्रा अनुभव गर्न सक्छन्।
के सेन्ट्रोफेनोक्सिन कोलीन स्रोत हो?
हो, Centrophenoxine एक उत्कृष्ट choline स्रोत हो। Centrophenoxine choline स्रोत DMAE भन्दा बलियो मानिन्छ। सेन्ट्रोफेनोक्साईन रगत दिमागको मस्तिष्क पार गर्दछ जहाँ यो कोलोनमा टुक्रिन्छ।
के सेन्ट्रोफेनोक्साइन एक एंटी-एजिंग पूरक हो?
Centrophenoxine एक राम्रो एंटी-एजिंग पूरक हो। Centrophenoxine सेलुलर फोहोर र lipofuscin हटाउन सक्षम छ जुन बुढेसकालको साथ सम्बन्धित छ। Centrophenoxine antioxidant गुण पनि उमेर सम्बन्धित विकार संग सम्बन्धित छ कि oxidative तनाव रोक्न मद्दत गर्दछ।
DMAE दिमागको लागि के गर्छ?
DMAE neurotransmitter, acetylcholine को बहाव सुधार गर्दछ जुन संज्ञानात्मक समारोह जस्तै मेमोरी, सिकाई र एकाग्रताको लागि जिम्मेवार छ। यो पनि एक antioxidant को रूप मा कार्य गर्दछ अतः दिमागलाई oxidative तनावबाट रोक्दछ।
DMAE फास्फेटिडिलमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ जुन न्यूरल झिल्लीको एक महत्त्वपूर्ण घटक हो। यसले न्यूरल प्लास्टिसिटी बढाउन मद्दत गर्दछ।
यसबाहेक, DMAE ले एसिटिचोलिन उत्पादनको स्तर बढाउन सक्छ। यो choline मा रूपान्तरण हुन्छ जुन पछि एसिटिचोलिनमा परिणत हुन्छ र acetylcholine बनाउन प्रयोग गरिएको phospholipids मा पनि रूपान्तरण गर्न सक्दछ।
कहाँ meclofenoxate (Centrophenoxine) पाउडर किन्न?
आधुनिक संसारमा, तपाईं किन्न सक्नुहुन्छ Centrophenoxine पाउडर तपाइँको घर अनलाइन को आराम मा। यद्यपि तपाईले उच्च गुणवत्ताको सेन्ट्रोफेनोक्साइन पाउडर बल्क आपूर्तिकर्ताको लागि व्यापक रूपमा जाँच गर्नुपर्नेछ।
ग्राहक समीक्षा एक तरीकाले सेन्ट्रोफेनोक्सिन नूट्रोपिक बेनिफिटहरूको ग्यारेन्टी गर्ने र सम्भावित साइड इफेक्टको बारेमा जानकारी पनि जम्मा गर्ने एक तरीका हो। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं Centrophenoxine पाउडर बल्क को लागी स्रोत गर्न सक्नुहुन्छ आपूर्तिकर्ताहरु आधिकारिक यी पूरक बिक्री गर्न।
त्यहाँ छूटको मजा लिन Centrophenoxine पाउडर थोक परिमाण खरीद गर्न विचार गर्नुहोस्।
मार्सर, डी, र हपकिन्स, एसएम (१ 1977 6) बुढेसकालमा मेमोफेनोक्सेटको मेमोरी नोक्सनको भिन्न प्रभावहरू। उमेर र बुढेसकाल, ((२), १२–-१–१। doi: १०.०2/ / बुढ्यौ / .123.२.१२131।
पेटकोभ, भिडी, मोशर्रोफ, एएच, र पेटकोभ, भिभी (१ 1988 XNUMX) नूट्रोपिक ड्रग्स एडाफेनोक्सेट, मेक्लोफेनोक्सेट र पाइरासिटाम, र साइकोचोलिनको स्कोपोलैमाइन-बिग्रेको मेमोरी, अन्वेषणात्मक व्यवहार र शारीरिक क्षमताहरू (मुसा र चूहोंमा प्रयोग) को प्रभावको तुलनात्मक अध्ययन। एक्टि फिजियोलिका र फार्माकोलिका बुल्गारिका, 14(1), 3-13।
लियाओ, युन र वाang, रुई र टाang, सि-क्यान। (२०० 2005) सेन्ट्रोफेनोक्साइनले पुरानो सेरेब्रल इस्केमिया प्रेरित संज्ञानात्मक घाटा र मुसामा न्यूरोनल डिजेनेरेशन सुधार गर्दछ। एक्टि फार्माकोलिका सिनिका। २.. १25। ०-।।।
वर्मा, बी नेहरू (२००)) पार्किन्सन रोग न्यूरोकेमिस्ट्री इन्टरनेसनलको एक जनावरको मोडेलमा रोटेनोन प्रेरित ऑक्सीडेटिव तनाव बिरूद्ध सेन्ट्रोफेनोक्सिनको प्रभाव।
MECLOFENOXATE (CENTROPHENOXINE) (-१-51--68)
२. सेन्ट्रोफेनोक्साइन भनेको के हो?
C.Centrophenoxine vs DMAE
Cent. सेन्टरफेनोक्सिन मस्तिष्कमा कसरी काम गर्दछ?
Cent. सेन्ट्रोफेनोक्साइनले रक्त-मस्तिष्क बाधालाई पार गर्ने महत्त्व के हो?
6. लाभ meclofenoxate (Centrophenoxine)
S. साइड प्रभाव र सुरक्षा
C .Centrophenoxine स्ट्याक्स
१०. FAQ Centrophenoxine को